အလူမီနီယမ်နှင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အပြင်ဘက်ကိုသံမဏိဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားကာ ရေစိုခံပြီး energy saving လည်းဖြစ်ပါသည်။LED Floodlights သည်ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီး အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးကြောင့် ရေရှည်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေစေပါသည်။လူကြီးမင်းများအသုံးပြုလိုသောနေရာများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ စိတ်တိုင်းကျတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Solar wall light, LED wall light 1. Solar panel: Single/ Polycrystalline silicon solar panel 0.7W 2. Light Source: LED lamp, color can be choose 3. Accumulator Battery: NI-H/NI-CD battery, 3.6V 1000MA. 4. Controller: Mini intellective computer control, light control and time control, over-charge and over-discharge protection 5. Work Time: Normal last 3-5 days in cloudy/rainy days 6. Lamp Body: Casting Aluminum or stainless steel 7. Protection Grade: IP65. 8. Applicable Temperature: -30°C~50°C We are professional solar wall light supplier. High quality, fast delivery, good service, reasonable and competitive price. We can design solar light as your required. Hope to cooperate with you. Please feel free to contact us!
Sign Board နှင့် Lighting Box တို့တွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး LED Display ၏ စုံလင်တောက်ပသောစူပါရောင်ခြည်နှင့်ရေစိုခံအကြမ်းခံပြီး တည်ငြိမ်သော design ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး၊သက်သာသောဈေးနှုန်းနှင့်တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော LED Module ကို ဝယ်ယူအားပေးလိုသောလူကြီးမင်းများအနေဖြင့် ကျွန်တော်များ DreamLight Technology Co.,Ltd တွင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Aluminium alloy with painting or anodic oxidation treatment on surface, excellent heat dissipation.Lamp is sealed by reinforced glass, rubber ring, silica gel and silicone to make sure water proof.Imported low consumption &amp; high efficiency LEDs has high CRI and luminous flux.PMMA lens,15 degree,25 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 120 degree for your choice.Built-in LED driver with IC ensure stability of the light and could work under AC100 to AC240V. Protection level, IP65.Excellent heat sink ability and optical ability.Die-casting Aluminum body with powder-coatin and anticorrosion treatment.Humanized design concept,easy to install and mantain. လမ်းအလင်းကိုပို၍ လင်းစေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းအကျိုးရှိစေကာ မှောင်မိုက်သောအခါအတွက်ခေတ်သစ်အလင်းလည်းဖြစ်သည်။ဝယ်ယူလိုသောလူကြီးမင်းများအနေဖြင့် Dream Light Technology Co.,Ltd တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာစိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
MY HOME ကုမ္ပဏီမှတင်သွင်း ဖြန့် ချီသောအိမ်အလှဆင် မီးဆိုင်းများသည်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းသောပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။ထိုင်ဝမ်ပစ္စည်းများသည် အရည်အသွေး ကောင်းသောကြောင့် ဝယ်ယူသုံးဆွဲသူများအတွက် အဆင်ပြေလှပါသည်။ဟိုတယ်၊ရုံးခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊အိပ်ခန်းတို့ တွင်လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက်အလှဆင်ရန်တင့်တယ်လှပါသည်။ ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက်အလှဆင်နိုင်ရန် MY HOME ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်ဆက် သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
SWAROVSKI SCHONBEK Chandeliers
ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ မီးအလင်းရောင်ကို အထူးပြု၍ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် မီးဆိုင်းများကို လှပတင့်တယ်စွာ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ လှပတင့်တယ်ပြီး ဒီဇိုင်းမှာလည်း ထူးခြားဆန်းသစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ မီးလုံးတစ်လုံးချင်းအတွက် ဝါယာကြိုးတစ်လိုင်းချင်းစီ တပ်ဆင်အသုံးပြုပေးထားသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ခန့်ညားထည်ဝါသောကြောင့် အလှဆင်တပ်ဆင်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အသုံးပြုရန် တပ်ဆင်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အထူးသင့်တော်သော မီးဆိုင်းအမျိူးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်းတို့ ဟိုတယ်၊ ရုံးခန်း၊ ကွန်ဒို အစရှိသော နေရာများတွေမှာ အလှဆင်တပ်ဆင် အသုံးပြုကြပါသည်။ လှပဆန်းသစ်သော ကျောက်သလင်း crystal chandelier များမှ ဖယောင်းတိုင်မီးသီးများသည် ညဘက်အနားယူအိပ်စက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အလင်းအား ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ၁၀၀% အာမခံပေးသည်။ စိတ်ဝင်စားသော Customer များအနေဖြင့် email နှင့် ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့် ဖြစ်စေ ၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ကြည့်ရှု ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
3&quot; Panel Light (အဝိုင်းအမြုပ်)
Quality ကောင်းတဲ့ LED Chip အမျိုးအစားတွေထည့်သုံးထားတဲ့အတွက် မီးအလင်းအားမှာ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ရှိပြီး သုံးစွဲသူတိုင်းအကြိုက်တွေ့ပါတယ်။ ပစ္စည်းသက်တမ်း မှာနာရီပေါင်း (၅)သောင်း အထက်ကြာရှည်ခံပါတယ်။ မီးအလင်းရောင်ရဲ့Colour ကိုလည်းသဘာဝအလင်းရောင်နဲ့ အတူညီဆုံးဖြစ်အောင် ချိန်ဆပေးထားပါတယ်။ အလင်းဧရိယာလည်းကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက် အခန်းရဲ့နေရာတိုင်းကို အလင်းရောင်ဖြန့်လင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ “ကုမ္ပဏီအကြောင်းအရာ” TTH-LED ကုမ္ပဏီကို (၁၉၉၈) ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ပေါင်း (၂၀)ကျော်တိုင်အောင် အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေပါသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အစကနေအဆုံးထိ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီမှု့ဖြင့် ဦးစားပေးရောင်းချပါတယ်။ ရုံးချုပ်အနေနဲ့ ထိုင်ဝမ် တိုင်ပေမှာရှိပြီး စက်ရုံအနေနဲ့က တရုတ်ပြည်မှာ (၂)ခု၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ (၁)ခုရှိပါတယ်။ TTH-LED ရဲ့မီးပစ္စည်းများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဈေးကွက်ထဲမဖြန့်ခင် သေချာစွာ စနစ်တကျ အချိန်ပေးစမ်းသပ်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံပေါင်းများစွာရဲ့ လက်မှတ်မျိုးစုံကိုလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ခေတ်မှီဆန်းသစ်တဲ့မီးပစ္စည်းတွေကို လူကြီးမင်းတို့အတွက် နေရာမရွေး အဆောက်အအုံမရွေး အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
3&quot; Panel Light (လေးထောင့်အမြုပ်)
6&quot; Panel Light(အဝိုင်းအမြုပ်)